Umhla My Pet » 5 Izinto Unako Funda Malunga Ukuthandana Ukusuka 50 Amathunzi kagreyi
Wakha weva amahlanu nemibala Grey? Nangona zonke bebabaza inento yokwenza Kungumnqweno ngokwesondo kunye neendlela ezizodwa andwebileyo ukuzalisekisa oko, okunene nentsingiselo enzulu. Ngaba kunokwenzeka? enyanisweni, ewe. Le ncwadi ichaza umnqweno, umtsalane, nothando omnye komnye ngokusebenzisa bengqondo yomntu. Inyaniso, oko eneneni zingasetyenziswa njenge bible abathandanayo. nomdla? Ufunde ukuze ufumane iindlela ezahlukeneyo apho Fifty Shades of Grey nga ku fundisa ngalo ukuthandana kunye nobudlelwane.
isifundo #1: Ingqalelo olunye-Babechubekile
ngumKristu, umlinganiswa ophambili eyindoda, ufuna noAnastasia, kweqhawekazi. Wenza injongo yakhe kakhulu ngokucacileyo. ingqalelo ngokwesondo namandla akhe akuthethi zimke xa abanye abafazi eqaqambileyo ukungena umfanekiso. ingqalelo yakhe kuphela kuyo zotyelelo noAnastasia kuphela.
Le ingqalelo esinxilisayo kakhulu abafazi abaninzi ingakumbi kule mihla njengoko yoluntu ithi ukuba kulungile ukuba amadoda ukunika umdla ezingacacanga ukuba umfazi. Ukunika umhla ingqalelo ngokupheleleyo ngokususa iziphazamiso nokubanika zoqhagamshelwano iliso ngokupheleleyo kuya kukunceda ukuba nzulu indibaniselwano yakho uze ubonise ukuba ngokwenene mzuzu.
isifundo #2: Iqhutywa kwaye Intentionality
Soloko olawula ngokwakhe, UmKristu isigqibo ukutyala ixesha kunye nomgudu boPhuhliso iintlobo ngeentlobo zeziphiwo nezakhono. Kwakhona rhoqo ukhangela iindlela umngeni nokuphucula yena njengomntu, nje noAnastasia esenza xa egqiba ndlebe kunye zamaKristu kungakhathaliseki ukuba kangakanani kunzima.
Nangona kusenokubonakala ingenakwenzeka, kukho amadoda nabafazi ngaphandle apho baphumelela, ezikrelekrele, nangokwasemzimbeni kwaye nangokweemvakalelo kufanelekile. Ngokuphila ubomi obunenjongo ngokukhula ngemihla kunye nemingeni, unako sizimele okona leyo eya kukhokelela ekutsaleni ngabom iqabane efanayo.
isifundo #3: Ukulungele ukuba axhwalekileyo
Ukuphila ubomi ezaliswe yobisi ekhokelwa abangamaKristu ukuba zonke izinto ezandleni zakhe kwaye kugxininisa kukuphumelela. Ngoxa bukeka wawuyi ekuqaleni, uphawu umKristu uba ezintle njengoko ngokucothayo ikuvumela noAnastasia kwihlabathi yakhe ngokweemvakalelo ikuvumela wakhe kumphilisa.
anastasia, xa kuzaliswa msulwa kunye nokuziqonda, ugqiba ukuba eneneni akafuni zamaKristu. Yaye ngoxa ihlabathi yakhe ingaziwa ngokupheleleyo kwaye entsha kuye, yesifuba yena yokuphila kwakhe.
Ngenxa yoluntu kunye ingcamango yokuba ebonisa iimvakalelo kuthetha ubuthathaka, kokuba babujongwa ukubonisa kubo. Kodwa eneneni, ebonisa iimvakalelo ngenene enye yezinto iingwanyalala ukwenza. Wazithi omnye umntu kuni ayikhathalele ngokwenyaniso nokumthemba ubone ezi mvakalelo ivumela intlonipho nobudlelwane nzulu.
isifundo #4: Isigqibo
Christian uyazi ungubani kunye noko afuna ebomini ngokuphila ngokuvisisana nemilinganiselo aphakamileyo kuba uyazi ngokwenene ngokwakhe. Xa ugqiba ukuba ufuna noAnastasia, ukuba lithetha into.
Ukwenza i zigqibo, yokuba ndiyazingca yaye elibonisa, ekhokelayo imihla yakho ukongeza ekunxibelelaneni necebo kwiqabane lakho kunceda ukubethelela iinjongo ngamandla. Kusoloko kumnandi ukwazi ukuba bayafunwa kuphela babacela.
isifundo #5: uthando, uthando, kwaye abaluthiy yesini
Nakwiingqikelelo kukufa ukuba umnqweno wesini. Xa umKristu hayi umbetha, ukukatswa, okanye ebopha noAnastasia ukuya, yena ubambe, Ukuphulula, ezanga kakhulu zakhe. UmKristu womelele, ezithambileyo, ndlongo, kwaye elithozamisayo yonke gama Nine ukunga noAnastasia. Ize, Anastasia ufunda ukumthanda izimuncu ingqalelo yakhe kunye nemfuneko angalawulekiyo kuye.
ngokuxilonga ngokwesondo kunye sifunisela kuya kukunceda nzulu ulwalamano lwakho. onothando, nokumncoma, yaye befuna ukuba iqabane lakho ibonisa wonwabe nje ukuba umkhathalele kangakanani. Isitshixo ukubonisa ukuba wena neqabane kakuhle kuba ufuna ukuba.
Ezi mfundiso esuka amahlanu Shades of Grey kuya kukunceda ukuba nomtsalane iqabane ephupheni okanye nzulu ubudlelwane bakho sele ayanda.